नेकपामा राष्ट्रिय सभा सदस्य र सभामुख बन्न सुरु भयो दौडधुप, को को छन् लाइनमा ? – www.agnijwala.com
नेकपामा राष्ट्रिय सभा सदस्य र सभामुख बन्न सुरु भयो दौडधुप, को को छन् लाइनमा ?
यतिबेला नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ।बैठकमा रास्टियता र जनजिबिका भन्दा कसलाई सभामुख बनाउने र क – कसलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यको बनाउने बारेमा नेताहरु बीच रस्साकसी चलिरहेको छ। फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको पदावधि सकिँदैछ।निर्वाचन आयोगले माघफागुन २० गतेबाट ९ गतेका लागि रिक्त पदको निर्वाचन मिति समेत तोकिसकेको छ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार छानिने १८ जना सदस्यको सूचिमा पर्न यतिबेला दौडधुप सुरु भैसकेको छ । सम्भावित केहि उम्मेदवारलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाईएको भएपनि अझै धेरै संख्यामा रहेका नेताहरु राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्ने दाउमा छन् । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रदेश २ बाहेक यसपाली राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरु नेकपाबाटै निर्वाचित हुनेछन् । त्यसकारण पनि नेकपामा शिर्ष नेताहरुको घर दैलोमा आकांक्षीहरुको भिड लाग्न थालिसकेको छ । यी हुन दौडमा रहेका नेता यसपाली नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुषाल राष्ट्रिय सभाका लागि पक्का भैसकेका नेता हुन् । यस अघि उम्मेदवारको सूचिमा परेर पनि अन्तिम समयमा उनले राम बहादुर थापाका लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । त्यस्तै, नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त अर्का शसक्त दावेदार हुन् । नेकपा स्थायी कमिटीमै रहेका लिलामणी पोखरेल पनि राष्ट्रिय सभा जाने तयारीमा रहेको श्रोत बताउँछ । उनलाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने वचन दिएका छन् । नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली पनि राष्ट्रिय सभामा जाने मनस्थितीमा रहेको श्रोत बताउँछ । श्रीमाया थकाली, श्याम श्रेष्ठ, तुल बहादुर गुरुङ, सिता गिरी ओली, देवी ज्ञवाली लगायतलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी रहेको बताइन्छ । नेकपा युवा नेता जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरेले पनि आफ्ना लागि लबिङ गरिरहेका छन् । फागुन १९ देखि नेकपाका ८ जना, काँग्रेसका ७, राजपाका २ जना, समाजवादीका एक जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जनाको पदावधी फागुन २० गतेदेखि सकिँदैछ । प्रदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित १८ जनाका लागि प्रदेशमै निर्वाचन हुनेछ । हरेक प्रदेशबाट एक–एक गरी सातजना महिला र अन्यतर्फ सातजना, दुई दलित र दुईजना अल्पसंख्यक र अपांगता भएकाहरूमध्येबाट निर्वाचित हुनेछन् । अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा भने पुनः मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था अनुसार नै चयन गरिनेछ । १८ जनाको निर्वाचन भने पहिलो हुने प्रणालीबाटै गरिनेछ ।
सभामुखमा क–कसको दाबी  ?